Inona no atao hoe cynicism enlightened | Famoronana an-tserasera
Ny tambajotra sosialy dia nanova ny fomba ifandraisantsika ary mamela ny tenantsika ho hitan'izao tontolo izao. Olona maro no nahavita nisongadina noho ny tambajotra noho ny votoatiny, na lamaody, torohevitra manokana, asa famolavolana, sns.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny mpanao sary iray misongadina noho ny fanoharana nataony isika, izay ny foto-kevitra fototra dia ny fanakianana. cynicism nazava, izay miafina ao ambadik'io foto-kevitra io ary hahita andiana ohatra isika mba hahatakarana izany bebe kokoa.
Raha tsy mahafantatra an'i Eduardo Salles amin'ny tambajotra sosialy ianao dia mety ho noho ny antony roa ihany: na tsy manana finday misy connexion internet izy, na mbola tanora loatra ianao ka tsy mahafantatra. ny mpanao sary, Eduardo Salles dia lasa tompon-daka amin'ny fitsikerana mazava.
1 Inona no atao hoe cynicism mazava?
2 Fanehoan-kevitry ny Eduardo Salles
Inona no atao hoe cynicism mazava?
Tsy afaka miresaka momba ny fitsikerana mazava isika raha tsy miresaka an'i Eduardo Salles. Teo amin'ny dimy taona lasa izay, nanomboka namoaka ny sanganasany tamin'ny tambajotra sosialy i Eduardo ary nalaza tsikelikely tamin'izy ireo. Noho ny tambajotra dia hita ny fivoaran'ny sanganasany, mamorona ny fombany manokana, izay haingana sy amin'ny alalan'ny singa isan-karazany mandefa hafatra miaraka amin'ny fanoharana. fantsika fanoharana fa ny hany singa tsy niova hatramin'ny niorenany dia ny fanakianana.
Miaraka amin'ny mpanaraka maherin'ny 350 ao amin'ny Twitter, olona manodidina ny iray tapitrisa sy sasany ao amin'ny Facebook, ary manakaiky ny 30 ao amin'ny Instagram, lasa marika eo amin'ny tambajotra sosialy i Eduardo Salles, ary izany rehetra izany dia noho ny fanoharana nataony tamin'ny hatsikana asidra. Ireo fanoharana manakiana, esoeso momba ny fiarahamonina, nataon'i Eduardo Salles, dia te hampiseho ny lafiny mahatsikaiky indrindra sy mahatsikaiky indrindra eto amin'izao tontolo izao izay iainantsika.
Salles dia mpanao sary, mpamorona sary, mpanoratra ary talen'ny famoronana, mamaritra azy ho tsara amin'ny teny, fa tsara kokoa amin'ny sary. Izy mihitsy no milaza izany ny ambiguity dia ahafahanao mameno ny banga amin'ny fitsaratsaram-poanao manokana, ary ao anatin'ny kolontsaina feno fitsaratsaram-poana tahaka ny antsika dia miteraka vazivazy maro karazana tsy fidiny.
Ilay mpanao sary ao amin'ny bokiny, Illustrated Cynicism, dia mampiseho karazana fahaiza-manao sy fahatsorana, amin'ny alàlan'ny sary iray azony atao. mampita hevitra sy fahatsapana isan-karazany, amin'ny fomba mivantana sy mahafinaritra. Tsy manana valiny amin'ireo fanontaniana rehetra tonga ao an-tsaina isika, fa ny mpitsikilo ihany no mihevitra fa manana izany izy ary mahita ny zava-drehetra amin'ny fomba mahatsikaiky. Ny tiako holazaina dia hitako fa hifarana izao tontolo izao fa tsy miraharaha aho, ary ihomehezako izany. Ny hany azontsika atao manoloana izao tsy fahampian'ny valiny sy ny fisalasalana izao dia ny mihomehy ny tenantsika.
Ao amin'ity boky ity, a fanangonana ireo sanganasa tsara indrindra navoakan'i Eduardo Salles hatramin'ny taona 2009, misy pejy 144 amin’ny fitambarany, izay iresahana ny olana rehetra mety ho eo amin’ny fiainantsika, nefa mampiasa vazivazy.
Illustrated Cynicism, nanokatra varavarana maro ho an'i Eduardo Salles, nanao lahateny tao amin'ny Miami Ad School, niara-niasa tamin'ny gazety, namoaka boky, sns. Ny iray amin'ireo tetikasany lehibe dia Pictoline, orinasa mpanamboatra fampahalalam-baovao sy fanoharana, izay iasan'ny vondrona mpanao sary, anisan'izany i Eduardo Salles.
Amin'ny alàlan'ny endrika hita maso samihafa, mpanao sary, manova ny vaovao rehetra ho votoaty afaka mifandray amin'ny olona marobe fa ho hitan'izy ireo izany rehetra izany amin'ny fomba tsotra sy haingana ary akaiky.
Pictoline, miaraka amin'ireo endrika votoaty hita maso vaovao, dia lasa marika manerantany ary amin'ny iray amin'ireo haino aman-jery miely indrindra any Amerika Latina. Miaraka amin'ny endrika tsara, ny karazana fampahalalana rehetra dia azo ovaina ho zavatra miavaka, manan-danja ho an'ny fiarahamonina.
Ankoatra ny bokiny dia nanokatra mombamomba tao amin'ny tambajotra sosialy Facebook antsoina hoe, the fanahin'ny maneso, izay nihomehy ny mpanaraka azy, ny mpiasa, ny mpanao politika, ny mpianatra, sns. Amin'ny ankapobeny, amin'ny ankamaroan'ny olona manaraka azy amin'ny tambajotrany, fa amin'ny fanajana hatrany.
Ao amin'ny bokiny iray hafa, Ny siansa ny cynics, dia miresaka momba ny olan'ny cynicism ary milaza fa, ny siansa izay ananan'ny cynics, no mamakafaka ny fiainantsika andavan'andro sy ny manodidina azy izay mety hahasosotra azy.
Ao amin'ity boky ity dia aseho ny fitambarana fanoharana izay miresaka momba ny fitondran-tenan'ny olombelona mistery indrindra, ny tontolo iainantsika ankehitriny sy ny hadalana, ny hadalana izay niaretantsika rehetra.
Fanehoan-kevitry ny Eduardo Salles
Manaraka, andeha hojerentsika a fanangonana ny asa tsara indrindra nataon'i Eduardo Salles misy sary ary ny toetrany dia nanazava ny tsininy.
Ao amin’io fanoharana io izy dia milaza amintsika ny amin’ny fiainana manaraka lobaka vaovao, manomboka amin’ny fotoana nividianantsika azy ka hatramin’ny fahafatesany.
Ahoana no tena hiresahanao aminay momba ireo orinasa manadinadina anay?, fa tena tsy sahy. Amin'ity fanoharana ity dia hitantsika ny euphemisms momba ny dinidinika momba ny asa.
Amin'ity manaraka ity dia hitantsika ny fomba nampiasainy io vazivazy io mba hihomehezana amin'ny injeniera sy ny architects rehefa mamaha olana.
Ary amin'ity tranga ity, ny zavatra reharehany dia ny eritreritra, na hevitra, izay ananan'ny mpianatra maro momba ny fandehanana any amin'ny oniversite. Ity fanoharana ity dia mametraka ny fanontaniana hoe nahoana ianao no tena te hianatra any amin'ny oniversite.
nahoana ny olona mahay fianarana ihany no heverina ho manam-pahaizana ary tsy ireo izay mahay zavatra hafa tsy manana izany.
Ity dia iray amin'ireo fanoharana, miaraka amin'izany mihomehy ny tena Iza no tsy manome arivo fihodinana ny lohany alohan'ny hanaovana zavatra.
Iza no tsy mahafantatra olona manana ny ordinateur desktop tahaka izao, raha tsy fantatrao na iza na iza dia ianao io olona io.
Ny politika no tanjona mazava, raha ny fanaovana satiora no resahina. Samy nahita mpanao politika roa tava isika rehetra, mampanantena ary avy eo tsy manafaka, miezaka manova hevitra.
Nahavita izany i Eduardo Salles mamorona hetsika, amin'ny alàlan'ny fanoharana izay tohanan'ny olona maro sy lazainy. Ity mpanao sary an-tsary ity dia maneho amim-pahendrena ny fiaraha-monina misy antsika ankehitriny, mampiseho izany amintsika mivantana ary tsy manafina na inona na inona, mampiseho amintsika ny fitsarana an-tendrony ankehitriny.
Nahavita naneho tanteraka ny fanahy mifanohitra izay mampiavaka antsika amin'ny maha-olombelona antsika ny cynicism nazava.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » inona no atao hoe cynicism